PC အတွက် Brawl Stars ကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ချရမလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
PC အတွက် Brawl Stars ကိုဘယ်လို download ချရမလဲ
Ignacio Sala | | အားကစားပြိုင်ပွဲ
Samsung သည် Galaxy Note နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းများတွင်ဖန်သားပြင်ကြီးများကိုလောင်းသည့်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကန ဦး လောင်းကြေးမှာအခြားထုတ်လုပ်သူများကရယ်မောခဲ့ကြသော်လည်းအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့အားလုံးသည်ချွင်းချက်မရှိဘဲလိုက်နာခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများအတွက် မျက်နှာပြင်လုံလောက်မှုမရှိ
စမတ်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်မျက်နှာပြင်ပြတ်တောက်သွားတဲ့သုံးစွဲသူများအတွက်အလွယ်ဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းကသူတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကို PC ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့အာရုံစိုက်မယ် Brawl Stars ကို PC တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း, နှင့်ဤကစားသမားများအတွက်ပါဝငျကွောငျးအပေါငျးတို့သအားသာချက်များ။
1 Brawl Stars ဆိုတာဘာလဲ
2 Brawl Stars ကို PC တွင်မည်သို့ download လုပ်၍ တပ်ဆင်ရမည်နည်း
2.1 BlueStacks ကို download လုပ်ပါ
2.2 BlueStacks လိုအပ်ချက်များ
2.2.1 PC အတွက် BlueStacks ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ
2.2.2 PC အတွက် BlueStacks ၏အကြံပြုချက်များ
2.3 BlueStacks ကို PC ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ
2.4 PC ပေါ် Brawl Stars ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
3 Brawl Stars ကို PC ရှိ Controller ဖြင့်ကစားနိုင်သည်
4 သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Brawl Star အကောင့်ကိုပိတ်ပင်နိုင်သည်
5 Brawl Stars ကို Mac ၌မည်သို့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရမည်နည်း
5.0.1 Mac အတွက် BlueStacks နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များ
Brawl Stars ဆိုတာဘာလဲ
Brawl Stars သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ရှင်သန်ရန် mode တစ်ခုဖြစ်သည့် 3vs3 multiplayer battle game ဖြစ်သည် သငျသညျတစ် ဦး ကို PC မှကစားနိုင်ပါတယ် သင်ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့ပြသသောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာလျှင်။ ဤခေါင်းစဉ်ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်တီးခတ်ရန်ရည်ရွယ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းပုံစံအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းသာပျော်မွေ့နိုင်သည်။
မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုသုံးရန်ပီစီတွင် Android ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့ကစားနေစဉ်တိုက်ပွဲဝင်သူအသစ်များသည်စူပါတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ကိရိယာများနှင့်သော့ခတ်ထားကြပြီးတိုက်ပွဲများနှင့်အတွေ့အကြုံများအရကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်လာနိုင်သည်။ ဒီဂိမ်းကိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ ပြီးတော့နှစ်လတစ်ကြိမ်မှာတော့တိုက်ပွဲအသစ် (Brawl Pass) အသစ်ကိုသင်ရရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီမှာမင်းကရန်ပွဲတွေ၊ ကျောက်မျက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရနိုင်တယ်။
Brawl Stars7ဂိမ်းအမျိုးအစားများသည်
နတ်သမီးပုံပြင်။3vs3တိုက်ပွဲများအတွက်ဆန့်ကျင်အသင်းကိုအနိုင်ယူနှင့် 10 အနိုင်ရရတနာများကိုဖမ်း။
ရှင်သန်မှု။ တစ်ကိုယ်တော် (သို့) နှစ်လုံးကရန်ပွဲသမားများနှင့်နောက်ဆုံးရပ်နေသူများကိုအနိုင်ရရန်ခွင့်ပြုသည်။
ရန်ပွဲဘောလုံး။ ဤပုံစံတွင်သင်သည်သင်၏ကစားနိုင်စွမ်းကိုဘောလုံးနှင့်ပြသရန်လိုပြီးပြိုင်ဘက်အသင်းမတိုင်မီဂိုး ၂ ဂိုးသွင်းယူရမည်။
Starfighter ။ 3v3 တိုက်ပွဲတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များကိုသတ်သောအဖွဲ့သည်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
လုယက်မှု။ ပြိုင်ဘက်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားစဉ်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်နောက်ထပ် 3vs3 စနစ်ဖြစ်သည်။
အထူးဖြစ်ရပ်များ။ အထူး PvE နှင့် PvP စနစ်များကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။
ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ။ ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ခြေစစ်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်အားကစားလောကသို့ဝင်ရောက်ပါ။
သင်ကြိုက်လျှင် Clan ၏တိုက်ပွဲဖြစ် o Royale ထိပ်တိုက်တွေ့Brawl Stars ကိုဖန်တီးသူများ Supercell နှင့်တူသည်ဆိုလျှင်၊ ဤခေါင်းစဉ်ကိုစမ်းကြည့်သင့်သည်။
Brawl Stars ကို PC တွင်မည်သို့ download လုပ်၍ တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Brawl Stars သည် iOS နှင့် Android မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်သာရရှိနိုင်သည့်အတွက်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပီစီမှသာခံစားနိုင်သည် Android emulator မှတဆင့်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် PC အတွက် Android emulators အမြောက်အများကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်သုံးစွဲသူများလိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းစတိုးသို့ဝင်ခွင့်ရရုံမျှမကပါ။
PC တွင် Android အတွက်မည်သည့်ဂိမ်းနှင့်မည်သည့် application ကိုမဆိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ BlueStacks,aဖြစ်သည် လုံးဝအခမဲ့ app ကို ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဂေဟစနစ်မှာဘယ်ကွန်ပျူတာကိုမဆိုကွန်ပျူတာ၊
BlueStacks ကို download လုပ်ပါ
ပထမဆုံး PC တစ်ခုမှာ Brawl Stars ကိုကစားဖို့လုပ်ရမယ် BlueStacks ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို download လုပ်၍ ထည့်သွင်းပါ လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်မူ ၄ သည်ဗားရှင်း ၄ ဖြစ်သော်လည်းအရင်းအမြစ်နည်းပါးသောကွန်ပျူတာများအတွက်လည်းရနိုင်သည်။
BlueStacks ကို download လုပ်ရမယ် BlueStacks ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပါ ထိပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ BlueStacks5ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
BlueStacks ကို PC ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်၎င်းကိုစီမံခန့်ခွဲရမည် Windows7သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည် နှင့် Intel သို့မဟုတ် AMD ပရိုဆက်ဆာ။ အနိမ့်ဆုံးအကြံပြုထားသောမှတ်ဉာဏ်သည်4GB (RAM ကို hard disk သိုလှောင်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိစေရန်), သိုလှောင်ရန်နေရာ5GB နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသည့်ကွန်ပျူတာတွင်အုပ်ချုပ်သူအကောင့်တစ်ခုရှိသည်။
PC အတွက် BlueStacks ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ
SW: Microsoft Windows7နဲ့အထက်။
ပရိုဆက်ဆာ: Intel သို့မဟုတ် AMD ပရိုဆက်ဆာ။
RAM - သင့် PC မှာအနည်းဆုံး 4GB RAM ရှိရမယ်။ (4GB နှင့်အထက် disk space ရှိခြင်းသည် RAM အတွက်အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ )
သိုလှောင်မှု - ၅ GB GB နေရာလွတ်ရှိသည်။
သင်သည်သင်၏ PC တွင်ကြီးကြပ်သူဖြစ်ရမည်။
အဆင့်မြှင့်ထားသောဂရပ်ဖစ်ယာဉ်မောင်းများ Microsoft သို့မဟုတ် chipset ရောင်းချသူ။
PC အတွက် BlueStacks ၏အကြံပြုချက်များ
OS: Microsoft Windows ၁၀
ပရိုဆက်ဆာ: Intel သို့မဟုတ် AMD Multi-Core ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုတည်းချည်မျှင်အခြေခံ> 1000 ။
ဂရပ်ဖစ်: Intel / Nvidia / ATI, အခြေခံစံနှုန်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်သို့မဟုတ် discrete controller ကို> = 750 ။
RAM မှတ်ဉာဏ် - ၈ GB (သို့) ထိုထက်ပိုသည်
သိုလှောင်ခြင်း - SSD
BlueStacks ကို PC ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ
ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ပြီးတာနဲ့သူကနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို install လုပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့တာက application မဟုတ်ပေမယ့် installer တစ်ခု၊ BlueStacks မှလတ်တလောဖိုင်များအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်တာဝန်ရှိသောတပ်ဆင်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရပါမည် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပြီးပါက၎င်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်သတိရရမည်။
PC ပေါ် Brawl Stars ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
BlueStacks တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သွားပြီးအပေါ်တွင်ပြသသောမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ Brawl Stars ကို install လုပ်ရန်၊ ဂိမ်းစတိုးကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အကောင့်၏အချက်အလက်များကိုထည့်ပါဒီခေါင်းစဉ်ကိုကစားနေတဲ့မိုဘိုင်းကိရိယာမှာအသုံးပြုတဲ့အကောင့်အတူတူပဲ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ရရှိသောတိုးတက်မှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဗားရှင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုလိမ့်မည်။
ပြီးရင် Play Store ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်ပြသတူညီသော interface ကိုရှာဖွေရေးဘားကိုနှိပ်ရုံဖြင့် Brawl Stars ဟုရိုက်ပြီး Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ Supercell ID ရှိရင် အားလုံးဂိမ်းတိုးတက်မှုစည်းညှိ အခြားကိရိယာများမှာငါတို့ဒေတာရိုက်ထည့်။
Mobile Forum မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သမျှအခါအားလျော်စွာဂိမ်းတိုးတက်မှုကို developer account မှတဆင့်တပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ဇာတ်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ် WASD သော့ကိုသုံးပါ။ ပစ်ရန်နှင့်ပစ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအနီရောင်အစက်ကိုရန်သူများသို့ဆွဲခြင်းဖြင့် mouse ကိုသုံးလိမ့်မည်။
Brawl Stars ကို PC ရှိ Controller ဖြင့်ကစားနိုင်သည်
Controller နှင့်ကစားလိုလျှင်၎င်းကို BlueStacks configuration options မှတဆင့်ယခင်က configure လုပ်၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Brawl Star အကောင့်ကိုပိတ်ပင်နိုင်သည်
Supercell သည်အခြားဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့ပင်ငွေရှာလိုသည် နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏ကစားသမားကစားနှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းအဖြစ်သူတို့ကစားတာကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ Shooter ကဲ့သို့သောအခြားဂိမ်းများနှင့်မတူဘဲ PC မှကစားသောအခါအားသာချက်သိသာသည့်နေရာတွင်ဤခေါင်းစဉ်၌ပြတင်းပေါက်မရှိချေ။ အကယ်၍ သင်က PC မှကစားခြင်းကိုအသုံးမပြုလျှင်၊ သင်ယူခြင်းကွေးသည်အနည်းငယ်မြင့်တက်နိုင်သည်။
ဒီနှင့်အတူငါဆိုလိုဘူး သူတို့သည်သင်၏အကောင့်ကိုဘယ်တော့မျှပိတ်ပင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင် emulator တစ်ခုမှကစားသောကြောင့်၎င်းတို့လုပ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ အကယ်၍ Supercell သည်၎င်းကို emulator မှဖွင့ ်၍ မဖွင့်လိုပါက၎င်းကိုခွင့်မပြုပါ။
Brawl Stars ကို Mac ၌မည်သို့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရမည်နည်း
BlueStacks သည် Windows အတွက်သာမကဘဲ Apple Mac ဂေဟစနစ်အတွက်လည်းရှာဖွေနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး emimators များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ BlueStacks ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါမယ် PC ပေါ်ရှိ Brawl Stars ကိုဒေါင်းလုပ်အပိုင်းတွင်ငါပြခဲ့သောအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ.
Mac အတွက် BlueStacks နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များ
MacOS Big Sur ရောက်ရှိလာချိန်တွင်အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်လည်ပတ်မှုများကို Laptop နှင့် Desktop များအတွက်များစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သဟဇာတဖြစ် update လုပ်ခဲ့ကြပြီ။
BlueStacks သည်၎င်း၏ application ကို Big Sur နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အေးဆေးစွာပြောဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ Aprilပြီလအထိ (Big စက်ကိုစက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင်စတင်ခဲ့သည်) operating system ၏အသုံးပြုသူများကစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်သွင်းနိုင်လာတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ သင်ဤ link တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ခြေလှမ်းများစီးရီး။
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည် macOS နှင့်အတူ BlueStacks သဟဇာတ Mac အထောက်အပံ့စာမျက်နှာကတဆင့်။ ဒါမှမဟုတ် Mac အထောက်အပံ့စာမျက်နှာ.
BlueStacks မှရရှိနိုင်သောဂိမ်းများကိုတပ်ဆင်။ ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုစီမံရမည် MacOS 10.12 (သို့) ထိုထက်ပိုသည်နှင့် 2014 ခုနှစ်မှစ၍ ဖြစ်ရမည်။ အဆိုပါပရိုဆက်ဆာသည် 64-bit, Intel HD 5200 နှင့်နောက်ဆက်တွဲဂရပ်ဖစ်များ၊4GB RAM (8 GB သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသည်ကိုထောက်ခံသည်) နှင့် resolution 1.280 × 800 နှင့်အထက်ရှိရမည်။
Windows လိုပဲ BlueStacks ကို install လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုသူကဖြစ်ရမယ် စစ်စတမ်အားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ။ BlueStacks ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်သော disk space သည် 8 GB ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည့်ဂိမ်းများကသိမ်းထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အားကစားပြိုင်ပွဲ » PC အတွက် Brawl Stars ကိုဘယ်လို download ချရမလဲ
Mobile Legends ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ